‘ लकडाउनका बेला थोरै तथा आधिकारिक समाचार मात्र सुन्नुहोस् , विश्वकै महामारीको चिन्ता नलिनुहोस ।’ - Health Today Nepal
‘ लकडाउनका बेला थोरै तथा आधिकारिक समाचार मात्र सुन्नुहोस् , विश्वकै महामारीको चिन्ता नलिनुहोस ।’
April 10th, 2020 बिशेषज्ञ लेख0comments
डा. रविन्द्र समिर,
कोरोना भाइरसको त्रासका कारण अहिले लकडाउनको अवस्था छ । घरबाहिर जान नपाइने भएकाले यो बेला धेरै तनावमा छन् । तनावलाई सही किसिमले व्यवस्थापन गर्नु सबैले जान्नु पर्छ । यो बेला थोरै तथा आधिकारिक समाचार सुन्नुहोस । कोरोना प्रकोप कहाँ कसरी फैलिएको छ ? आफ्नो देश र ठाउँमा कस्तो छ ? आफ्नो तथा अरु देशका सरकारले कसरी काम गरिरहेका छन ? आदि तथ्यको जानकारी लिनुहोस । यसले गर्दा तपाइले आफु सुरक्षित हुने उपाय सिक्नुहुन्छ । विश्वकै महामारीको कारण चिन्ता नलिनुहोस । कोरोना कहरका बेला कसरी तनाव व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त ? भन्ने बिषयमा ५ वटा सुझावको पालना गर्नुहोस ।
१. हात सम्हाल्नुहोस : हाम्रो हातले बाहिर कतै छुने काम नगरोस भन्ने कुरामा हामी चनाखो हुनु पर्छ । हाम्रो हात नाक, मुक,आँखामा नजाओस, सकभर दाहिने हात चल्ने व्यक्तिले बायाँ हात चलाउनुहोस, देब्रे हात चल्नेले दायाँ हात चलाउनुहोस, खोक्दा कुहिनोमा मुख राख्नुहोस्, हातलाई पटक पटक साबुनपानीले मिचिमिची धुनुहोस, सफा आफ्नै टावेलले हात पुछ्नुहोस, त्यो हातमा अझै शंका छ भने २ देखि४ थोपा ह्याण्ड स्यानिटाइजर वा स्प्रिट कपास राखेर सफा गर्नुहोस, आफ्नै शरीरमा पनि हातको प्रयोगमा रोक लगाउनुहोस ।
२. आफुलाई चाहिने सामान स्टक राख्नुहोस : सरकारले स्टक नराख्न भने पनि हातमुख जोड्नै पर्ने, स्टक पनि नराख, घर बाहिर पनि नजा भनेर हाम्रो दैनिक समस्या अरुले टार्ने होइन, तसर्थ मन ढुक्क र शान्त हुन आफुलाई चाहिने औषधि, चामल, पिठो, दाल, तेल, नुन, साबुन, बच्चाले खाने आइटम लगायत १,२ महिनाको नकुहिने खाद्यान्नको स्टक राख्नुहोस। यसले तपाईंलाई निस्फिक्री र सुरक्षित अनुभव गराउँछ ।आत्मबल बढ्छ, पसल रित्तो भएपनि तपाईलाई तनाब हुँदैन । अत्यधिक स्टक नराख्नुहोस हामी जस्तै अरु व्यक्तिलाई पनि स्टक चाहिन्छ भन्ने बुझ्दा झन आनन्द आउँछ । अलिकति क्यास पैसा पनि राख्नुहोस, बैंक जाने स्थिति नभएपनि काम चल्छ भनेर तपाईलाई थप निस्फिक्री बनाउँछ, पैसाको स्टकले ।
३. थोरै तथा आधिकारिक समाचार सुन्नुहोस : कोरोना प्रकोप कहाँ कसरी फैलिएको छ ? आफ्नो देश र ठाउँमा कस्तो छ ? आफ्नो तथा अरु देशका सरकारले कसरी काम गरिरहेका छन ? आदि तथ्यको जानकारी लिनुहोस । यसले गर्दा तपाइले आफु सुरक्षित हुने उपाय सिक्नुहुन्छ । विश्वकै महामारीको कारण चिन्ता नलिनुहोस । तर राम्रोसंग जानकारी लिनुहोस, हाम्रो शरीर तथा मनले विषम अवस्था थाहा पायो भने यसको बचावटको लागि हरदम तयार रहन्छ ।
४. समयको सदुपयोग गर्नुहोस : कोरोना संक्रमणको तिब्र प्रसारले गर्दा हाम्रा अनेक काम जस्तै सेमिनार, पेशागत कार्यक्रम, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि रोकिएका छन । संसार ठप्पप्राय हुँदा धेरैको रोजगारी गएको छ । आयश्रोत सुकेको छ । यस्तो अवस्था सधै रहदैन । त्यो बेलासम्मको लागि खाने, सुत्ने, फिल्म हेर्ने, नेट चलाउने मात्र नगर्नुहोस । आफ्ना परिवार तथा आफन्तसंग स्मरणयोग्य समय बिताउनुहोस । गीत सुन्नुहोस , आर्ट गर्नुहोस, केहि लेख्नुहोस, सकारात्मक छलफल गर्नुहोस, आफ्नो सरसफाई, खानपिनमा ध्यान दिनुहोस , योग गर्नुहोस, ध्यान गर्नुहोस, उर्जा दिने खालका स्पिच सुन्नुहोस । यो मौका हाम्रो जीवनमा कहिल्यै आएको थिएन र पछि पनि आउने छैन। यसलाई फिल गर्नुहोस ।
५. बिनम्र, दयालु र सहयोगी बन्नुहोस : सबै जात, धर्म, लिंग, उमेर र बर्गका व्यक्तिसंग समभाव राख्नुहोस । यो समय बिरोध मात्र गर्ने समय होइन ्र साम्प्रदायिक हुने समय हैन । लोभीपापी हुने समय होइन, आफुलाई अत्यावश्यक सामान बाहेक धेरै संग्रह गर्ने समय हैन । अत्यन्तै न्यून आय भएका छिमेकीलाई सहयोग गर्दा धर्म मात्र हैन आफ्नो मन शान्त तथा प्रसन्न हुन्छ । यो समय भ्रष्ट्राचार गर्ने, घुस खाने, कमिसन खाने जस्तो निकृष्ट काम गर्ने समय हैन । केहि लोभीपापीले कात्रोमा खल्ती सिलाएका छन भने तिनीहरु निदाउन पाएका छैनन । पैसा लुकाउने तनावले छटपटीएका छन । अरुले थाहा पाउँछ कि भनेर त्रसित छन, भविष्यमा जेलबास हुने हो कि भनेर कहालिएका छन अर्थात उनीहरुले आफ्नो इम्युनिटी पावर ध्वस्त गरिरहेका छन । हामीले त्यस्तो पाप नगर्दा आत्म शान्ति मिल्छ । ( डा. समिर जनस्वास्थ्य विज्ञ हुन । )
Previous article ७ वटै प्रदेशलाई ५ हजारका दरले र्यापिड डाइग्नोस्टिक किट
Next article चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको तलव कट्टी नगरिने